Bogga ugu weyn Xaqiiqooyinka & Khuraafaadka Lacagta Coinstar: Wax kasta oo Sir ah oo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato 2021
Waxaad haysaa weel xamuulka qadaadiicda oo aad ka fekereyso sidaad u mari doonto culayska ah inaad mid-mid u tiriso adigoo isku dayaya inaad dhigato. Daal, miyaanay ahayn? Su'aashu waxay tahay halkii aad ku quudin lahayd mashiinka-tirinta mashiinka-sida Coinstar oo lacag ah?
Costar waxay aad uga dhigaysaa mid aad uga fudud ka qaadista shilimaadkayaga bangiga, gaar ahaan maadaama aynaan khasab ahayn inaan xisaabino shilimaad kasta lafteena. Si kastaba ha ahaatee, caqabadda kaliya ee dadku haystaan ​​waa Lacagta Coinstar oo ah lacagta boqolleyda ee tirinta shilimaadka.
Maadaama uusan qofna dareemeyn wanaag inuu lumiyo lacagtiisa dheeraadka ah, waxaan ku faraxsanahay inaan kugu wargalinno inay jirto hab looga gudbi karo khidmadda Coinstar si badbaado leh, sharci ah, oo xitaa lagu taliyay Coinstar lafteeda. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad la joogto qoraalkan.
Waa maxay Coinstar?
Haddii aad ku nooshahay Mareykanka waxaad u badan tahay inaad taqaan Coinstar, laakiin kuwa aan ku noolayn, shirkadan ayaa samaysa nidaamyada tirinta lacagta birta ah kuwaas oo laga heli karo dukaamada.
Inta badan waxaad ka heli kartaa dukaamada raashinka sida Kroger iyo Walmart, laakiin sidoo kale dhowr silsilado oo kale oo yar yar oo dalka oo dhan ah.
Mashiinnadani waxay kuu sahlayaan in aad soo gashid, ku tuuraan shilimaadkaaga nidaamka tirinta, ka dibna lacag aruuriso. Taasi waa mid fudud, laakiin bilaash uma sameeyaan. Lacagta Coinstar waa 11.9% wadarta deebaajigaaga.
Lambarkan wuxuu ku kala duwan yahay meherad ilaa ganacsi maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay kabto khidmadda ka shaqaynta. Si kastaba ha noqotee, tani waa khidmadda caadiga ah ee ay sheegtay Coinstar. Xitaa waad daawan kartaa khidmadda soo baxaysa marka qadaadiicdaada la tiriyo. Waxaad si toos ah u arki kartaa khidmadda ku habboonaanta hortaada.
Waa maxay khidmadda Coinstar?
Coinstar waxay kaa qaadaysaa lacag si aad u dhigato lacagtaada oo aad u hesho lacag -celin. Waa inaad iyaga lacag siisaa si aad lacag caddaan ah uga hesho shilimaadkaaga. Waxay yihiin, ka dib oo dhan, ganacsi ku habboon. Lacagta Coinstar waa 11.9% wadarta deebaajigaaga laakiin waa la dhaafi karaa.
Nasiib wanaag, waxaan halkan u joognaa inaan ku tusno sida looga fogaado khidmadda Coinstar. Ma aha sharci darro waxayna xitaa ku muujiyaan mareegtooda.
Ma mudan tahay CoinStar?
Wax walba waxaa jira waqti iyo meel. Adeegsiga mashiinka CoinStar si aad u tiriso oo u beddesho lacagtaada kaydsan ma aha wax ka duwan, waxaana jira waqtiyo aysan ahayn ikhtiyaar aad u xun.
Haddii aad keydiso qadaadiic badan oo aadan awoodin (ama aadan awoodin) inaad waqtiga ku qaadato tirinta iyo rogid, mashiin ayaa laga yaabaa inuu yahay dariiqa loo maro. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii aadan lahayn bangi maxalli ah ama aad rabto inaad lacag ku kaashto si ku habboon isla goobta aad wax ka iibsanayso.
Haddii aad si joogto ah lacag ugu bixiso tiro kasta oo tafaariiqle ah - oo ay ku jiraan Amazon - CoinStar ayaa laga yaabaa inay kuu noqoto xulasho weyn.
CoinStar waxay leedahay sumcad xumo inay tahay mashiin qaali ah, laakiin aan wajahno: shirkaduhu waxay mudan yihiin inay awoodaan inay bixiyaan adeeg iyo inay lacag ka qaadaan.
Ganacsigu wuu kobcayaa in kasta oo uu sare u kacay khidmadaha sannadihii u dambeeyay. Sida iska cad, dadka - kuwa og inay bixinayaan lacag - waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan oo ay helaan adeegga qiimo leh.
Sidee Coinstar u shaqaysaa?
Ka -soo -kabashada isbeddelkaaga Coinstar waa sahlan tahay. Kaliya ku shub qadaadiicdaada dukaanka oo mashiinku shaqada ayuu qabtaa.
Dooro mid ka mid ah saddexda ikhtiyaar ee habboon: hel lacag caddaan ah oo leh 11.9% khidmad (khidmaddu way kala duwanaan kartaa iyadoo ku xiran meesha), dooro kaarka eGift oo lacag la'aan ah, ama ku deeq sadaqada aad jeceshahay.
Fadlan hubi in qadaadiicdaadu nadiif yihiin oo qallalan yihiin oo aad ka saartay wixii wasakh ah, wasakh ah, ama shay kale oo xanibi kara qaybta lacagta ama faragelin kara habka tirinta. Ku rid qadaadiicda qolka. Gacanta kor u qaad oo geli qadaadiicdaada godka.
Hubi booska soo noqoshada ee qadaadiicda la diiday. Marka dhammaan qadaadiicdaada la tiriyo, waxaa lagu siin doonaa foojarka lacagta caddaanka ah ee warqadda ama kaarka eGift oo leh koodh u gaar ah oo dusha lagu daabacay. Markaad doorato hay'ad samafal, waxaad heli doontaa rasiid deeqdaada.
Haddii aad dooratay lacag caddaan ah, keen foojarkaaga diiwaanka lacagta. Fadlan soo iibso foojarkaaga lacagta caddaanka ah isla maalintii la soo saaray. Markaad dooratid kaarka eGift, waxaad had iyo jeer adeegsan kartaa koodh u gaar ah xagga sare ee foojarka si aad wax uga iibsato dukaanka tafaariiqda, makhaayadda ama internetka. Markaad ku deeqdo qadaadiicdaada, fadlan xafid rasiidkaaga.
Nuxur ahaan, markaad qadaadiicdaada ku riddo miiska, waxay qaadataa waqti in la tiriyo lacag kasta. Xitaa waxay ku ridi doontaa xoogaa yar saxaarad yar oo ay garan kari weyday (mararka qaarkood shilimaadkaas waxaa laga yaabaa inaan la aqbalin lacag).
Mar haddii la tiriyo shilimaadka, waxay ku siinaysaa wadar. Tani waa ka dib markii 11.9% lacag waa la soo saaraa. Waxaad dooran kartaa in lagu siiyo lacag caddaan ah, kaadhadh hadiyadeed lagu siiyo dukaan gaar ah, ama aad ugu deeqdo hay'ad samafal.
Haddii aad dooratid lacag caddaan ah, markaas ayaa khidmadda la bixinayaa. Haddii aad doorato labada kale, wax lacag ah lagama qaadayo lacagta qadaadiicdaada.
Markaad dooratid lacag caddaan ah, waxaad mashiinka ka helaysaa risiidh daabacan. Waxaad markaa u qaadan doontaa rasiidkan miiska adeegga macaamiisha ee dukaanka ku yaal.
Iyaga ayaa ka mas'uul ah inay ku siiyaan lacag caddaan ah. Coinstar ayaa markaa bixisa dukaanka. Marka, Coinstar si toos ah kuma siiso. Mashiinnadoodu waxay tiriyaan lacagta birta ah, ka dibna waxay ku siinayaan risiidh aad ku ururiso lacagtaas.
Laakiin yaa raba inuu ku bixiyo ku dhawaad ​​12% lacagtooda? Taasi waa sababta aan kuugu tusayno sida loo dhaafo khidmadda Coinstar.
Sida looga fogaado Khidmadda Coinstar
Ma jirto wax la dafiri karo in khidmadaha Coinstar ay yihiin kuwo aad looga caroodo iyadoo la tixgelinayo inay asal ahaan is -weydaarsanayaan lacag aad hore u lahayd.
Warka fiicani waa in ay jiraan waxyaalo kale oo lagu beddeli karo khidmadda ama la wada dhaafi karo marka aad haysato lacag aad u badan oo is -beddelaysa si aad lacag u samaysato.
#1. Ku beddel lacagtaada qadaadiicda kaararka hadiyadda lacag la’aan
Haddii aad ku heshay hanti isbeddel dabacsan hoostiisa barkimooyinka fadhigaaga, Coinstar ayaa hadda ku siinaysa fursad aad ku beddesho lacagtaada qadaadiicda kaarka hadiyadda ee elektiroonigga ah qaar ka mid ah noocyada ugu caansan.
Waxaad si fudud u geli doontaa isbeddelkaaga, dooro kaarka hadiyadda ee aad rabto, mashiinkuna wuxuu daabici doonaa rasiidh leh koodh u gaar ah oo aad u isticmaali karto sida kaarka hadiyadda ee jirka.
Waxa ugu fiican oo dhan, ma jiraan wax khidmad ah oo loogu beddelayo qadaadiicdaada kuubannada kaarka hadiyadda elektiroonigga ah.
Coinstar waxay xaddideysaa inta isbeddel ah ee aad ku beddeli karto kaarka hadiyadda. Markaa waxaa mudan in la ogaado xadka kala duwan.
Coinstar wuxuu ku siinayaa ikhtiyaarka inaad ku dhaafto khidmaddooda. Halkii aad lacag caddaan ah ugu heli lahayd qadaadiicdaada, waxaad ka iibsan kartaa kaarka e-gift gift.
Haddii aadan haysan qadaadiic kugu filan si aad u hesho kaarka hadiyadda, ha isticmaalin Coinstar. Runtii waa inaad sugtaa ilaa aad hesho qadaadiic badan. Waxaa jira noocyo kala duwan oo tafaariiqleyaal ah oo heli kara kaararka elektaroonigga ah. Kani waa habka ugu wanaagsan ee laguugu shubo lacagta birta ah oo aadan bixin lacag. Goobaha wax laga iibsado sida Amazon.com waxay noqon kartaa hab fiican oo looga takhaluso qadaadiicdaada oo lacagtaada loogu isticmaalo wax aad rabto.
#2. Baaxadda ka baxsan bangiga ama Khidmadda deynta
Bangiyada qaarkood waxay laamahooda ku bixiyaan ATM lacag la'aan ah. Haddii aadan macmiil ahayn waxaa laga yaabaa inaad bixiso khidmad si lacagtaada laguugu xisaabiyo. Khidmadu inta badan waa qayb yar oo ka mid ah shilimaadka la tiriyay.
Bangiyada badankood waxay sidoo kale ku weydiin doonaan inaad adigu iska rogto shilimaadka. Waxaad ka codsan kartaa dukaanka lacagta shilinka oo lacag la'aan ah. Ka dib marka shilimaadka la soo rogo, bangigu wuxuu u aqbalaa deebaaji.
Haddii aad nasiib u yeelatay inaad yeelato bangi leh mashiinnada tirinta shilimaadka ee laamahooda, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso sida khidmadda bangigu u barbar dhigto waxa Coinstar ka qaado si aad u aragto kan ugu wanaagsan.
#3. Samee Deeq
Iyada oo Coinstar waxaad sidoo kale ku tabaruci kartaa isbeddelkaaga samafal. Tani waa hab fiican oo wax lagu celiyo. Ma jirto wax lacag ah oo lagu bixinayo ka shaqaynta shilimaadka loogu deeqay hay'adaha samafalka. Deeqaha sidoo kale waa canshuur laga goosan karaa-u kaydi rasiidka deeqda dukumintigaaga canshuurta.
Hay'adaha samafalka waa:
Isbitaallada shabakadda xannaanada
Bulshada Leukemia & Lymphoma
Bulshada Aadanaha ee Mareykanka
Sanduuqa Duurjoogta Adduunka
At Coinstar, xaqiiqda ah inay ku habboon tahay oo aad ku qori karto canshuurahaaga waa laba lagu daray si loo tixgeliyo.
#4. La wareeg lacagta shilimaadka
Bangiyada badankood waxay siiyaan macaamiil doonaya lacag qadaadiic lacag la'aan ah. Wali waxaad haysaa shaqo yar si aad u xirto qadaadiicda, laakiin beddelka qaaliga ah ee adeegsiga Coinstar waa la tirtiray.
Markaad ogaato waxaad ku samayn lahayd isbeddelkaaga, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso inta aad u malaynayso inay kugu qaadan doonto inaad ku rogto lacagtaas qadaadiicda ah ee Coinstar ama bangigaagu kaa qaadi doono.
Waa maxay qiimaha hadda ee ALX Coin sanadka 2021 | Dib u Eegid Buuxda
Dib -u -eegista Mybitcointube.com 2021: Heli Seeraar Degdeg Ah Haddaad Daawato Fiidiyowga Youtube -ka.
Waa maxay Abaalmarinta Sweatcoin & Qiimaha 2021?
Faallooyinka USI Tech 2021: Sidee Sharci u tahay Shirkadda Lacagta ee Crypto?
Faallooyinka Bandit -ka TV -ga: Anteenada Bandhigga TV -ga Dhab ahaantii ma shaqeyneysaa?
Dhammaanteen waan ognahay sida qiimaha is-diiwaangelinta ay noqon karaan qaali. Kharashka iska-diiwaangelinta fiilooyinka, netflix, Iroko…
Dib -u -eegista Transferwise 2021: Lacag u dir Adeeg Dibadda ah ama Waa Maxay?
Tignoolajiyada ayaa adiga iyo aniga wax noo fududaysay taas oo aynaan ka welwelin…